Schedulicity: SaaS Ntinye Njikọ | Martech Zone
Schedulicity: SaaS Ntinye Njikọ
Wednesday, November 30, 2011 Tọzdee, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nụbeghị Ọchịchọ, ị ga .. ma ọ bụ ị ga-eji ya n'oge na-adịghị anya! Ugbua ruru ndị ọrụ 15,000, Schedulicity na-enye azụmahịa ọ bụla na-esetịpụ oge iji nweta ngwa ngwa n'ịntanetị, facebook na ekwentị nhazi oge onwe ka azụmahịa ha. Usoro a dị oke ọnụ… $ 19 kwa ọnwa maka otu onye ọrụ ma ọ bụ $ 34 kwa ọnwa maka ọtụtụ ndị ọrụ. Lọ ọrụ ahụ malitere otu afọ na ọkara gara aga ma nwee atụmatụ siri ike ma zuru oke nke na-elekwasị anya na azụmaahịa obere na ọkara.
Schedulicity na-enye ikike ịhọpụta oge maka ụlọ ọrụ karịrị ihe karịrị ahịrị 45, maka ihe niile site na nkịta na-eje ije, ndị na-akụ mmiri, na ndị ọrụ ntanetị na ntutu ntutu. Ọrụ a ma ama nke ọrụ ahụ na-ekwu maka onwe ya, ihe karịrị 60% nke ndị ahịa ọhụụ na-edebanye aha site na ndị na-ezo aka na ihe karịrị 500 ndị ahịa ọhụrụ na-agbakwunye kwa izu. Ọrụ a nwere oke itunanya 99% njigide ọnụego!
Isi igodo gunyere:
Ọhụhụ n'ịntanetị ntinye akwụkwọ.
Ekwe ka Fans akwụkwọ nhọpụta ozugbo gị Facebook page.
A zuru ezu ekwentị mkpanaaka na-enye ndị ahịa gị ohere itinye gị oge na oge ị bụla, ebe ọ bụla.
Klaasị, ogbako ma ọ bụ mmemme otu na-akwado, na-enye gị ohere ijikwa ma jupụta klaasị gị.
Na-enye ikpo okwu iji gwa ndị ahịa gị okwu ọpụrụiche na nkwalite na n'elu 75 yi, omenala ndebiri. Nke a gụnyere ike itinye ozi izizi na ihe ncheta oru!
Schedulicity nwere ọrụ ndị ahịa, nkuzi na ngwa ọrụ aka yana nnukwu obodo ndị ọrụ nwere ike ịkekọrịta atụmatụ na-aga nke ọma.
Schedulicity achọghị ihe ọ bụla arụnyere na ngwanrọ na ahịa na saịtị, dị nnọọ a di na nwunye akwukwọ mkpado na-eweta interface… ya mere, ha nwere ike iwekota na gị ugbu a na ebe nrụọrụ weebụ na a okwu nke nkeji. Ma, ha nwere Mmekọrịta Facebook ka ndị na-eso ụzọ gị wee nwee ike pịa usoro ihe omume gị ma mee ọhụhụ ozugbo site na Facebook:
Schedulicity abụghị naanị usoro nhazi oge, ọ na - enyere gị aka ịhọpụta nhọpụta emepere emepe dị ka a ga - asị na ọ bụ ngwakọ. A na-enye ụlọ ọrụ azụmaahịa iji nyere ha aka mejupụta usoro ha, na-eji atụmatụ mmapụta:
A na-etinyekwa nkwado maka mmemme ahụ.
Nke a bụ nnukwu ihe atụ nke nkwa nke Software dị ka Ngwọta. Site n'inye ndị mmadụ ihe siri ike, Schedulicity nwere ike ịnye ndị nwe azụmaahịa siri ike ma dịkwa ọnụ ala. Schedulicity na-ebido mmemme mmemme ndị ahịa ọhụrụ. Banye maka a free ikpe na akaụntụ na Ọchịchọ.
Tags: nhọpụtaoru ntinyenhazi ogenhazi oge n'ịntanetịchedtọ
Mere I Kwesịrị iji zipu Kaadị a Holiday
Ebufe Mbupu na ego